Ndị senti Louis Martin na Zélie Guérin, Onye dị nsọ nke ụbọchị 25 Septemba | Blọọgụ nke ekpere
(22 Ọgọst 1823 - 29 Julaị 1894; 23 Disemba 1831-28 August 1877)
Akụkọ banyere ndị senti Louis Martin na Zélie Guérin
Amụrụ na ezinụlọ ndị agha na Bordeaux, a zụrụ Louis ka ọ bụrụ onye nche. Ọchịchọ ya ịbanye n'òtù okpukpe enweghị afọ ojuju n'ihi na ọ maghị Latin. N'ịkwaga Normandy, ọ zutere onye na-akwa ákwà, bụ Zélie Guérin, onye nwekwara ndakpọ olileanya na mbọ ọ na-achọ ịbanye n'okpukpe. Ha lụrụ na 1858 ma afọ ndị gara aga ejiri ụmụ itoolu gọzie ha, agbanyeghị ụmụ nwoke abụọ na ụmụ nwanyị abụọ nwụrụ na nwata.
Louis gbara ọsọ ahịa nke Zélie gara n'ihu n'ụlọ ka ọ na-azụ ụmụ. Ọ nwụrụ n'ọrịa kansa ara na 1877.
Mgbe ahụ, Louis kpọgara ezinụlọ ahụ na Lisieux ka ha nọrọ nwanne ya nwoke na nwanne ya nwanyị, bụ ndị nyeere aka n'ịkụziri ụmụ akwụkwọ ya ise fọrọ ndụ. Ahụ ike ya malitere ịka njọ mgbe nwa ya nwanyị dị afọ 15 banyere n’ebe obibi ndị mọnk nke Ugwu Kamel dị na Lisieux na 1888. Louis nwụrụ na 1894, ọnwa ole na ole mgbe a nabatasịrị ya n’ụlọ ọgwụ.
Thatlọ ahụ nke Louis na Zélie kere zụlite ịdị nsọ nke ụmụ ha nile, ma nke kachasị nke ọdụdụ nwa ha, onye anyị maara dịka Saint Therese of the Child Jesus. A mara Louis na Zélie mma na 2008 ma bụrụ ndị Pope Francis tinyere na October 18, 2015. Oriri oriri nsọ nke ndị nsọ Louis Martin na Zélie Guérin bụ July 12.
Na ndụ, Louis na Zelia marala oke ọ greatụ na oke ihe mgbu. Ha kwenyesiri ike na Chineke nọnyeere ha n'ihe ịma aka niile metụtara alụmdi na nwunye, ịzụ ụmụ na ọrụ ha.
← Na post gara aga Gara aga post:Chee echiche taa banyere Chi nke Kraist nke di na Holy Eucharist
Ọzọ Post → Post ozo:Oziọma taa 25 Septemba 2020 na okwu Pope Francis